Halkee Dhegayso Music Videos Online in APP
Dhageysiga music on go ah waa mid ka mid ah qaababka ugu fiican taas oo qof kasta oo ku raaxaysan karaan oo aan wax ka kaaftoomi iyo arrinta oo dhan mahad Chine in la soo saaray arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in codsiga ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira waa mid ka mid ah waa u fududahay in la isticmaalo iyo baadhi song waxaa sidoo kale ka dhigay deg deg ah. Tutorial loo qoray hayo in aragtida dhammaan qaababka marka ay timaado geynta si user a marnaba ka Helayn adag tahay in la dhegeysato muusikada online waxaa hoorto guud ahaan qalabka kala duwan iyo sidoo kale. Dib u eegista deg deg ah ayaa si kastaba ha ahaatee la soo bandhigay hoos ku qoran:
2. Music Milk
7. Qodobbadani Cloud
9. La soco Radio
Download music xor ka ah goobaha la TunesGo
• Codsiga waxaa ugu wanaagsan ee la fududahay in la isticmaalo interface iyo geynta sida dib u eegis user.
• Codsiga ayaa pro ah database ballaaran kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala in ay ku raaxaystaan ​​heeso.
• Codsiga waxaa uu leeyahay cayayaanka ee daryaan iyo kala carar qaarkood.
a. User xaq u baahan yahay inuu soo bixi codsiga si aad u hubiso in interface ugu weyn ee ay u muuqataa sida kaaga muuqata sawirka hoose:
b. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in galaas raadinta weynaynaya la sii adkeeyey in ay sii wadi arrintan la xiriira:
c. User ayaa markaas u baahan yahay si loo hubiyo in keywords ku habboon ayaa la galay iyo liiska la rujin si song la riixi si ay u sii qulquli online.
Waxaa sidoo kale loo arkaa in ay tahay mid ka mid ah codsiga ugu fiican si loo hubiyo in ugu wanaagsan ee la sameeyo si user ah ee la xiriirta hoorto music online. Ay taageerayaan ciidammada xoogga Samsung waxa ay taasi la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira.
• Codsiga ayaa geynta ah oo weyn oo la kordhiyo iyo interface ayaa aad u soo jiidasho leh.
• toos ah user ayaa ka ciyaari kara heeso ka DJ iyo ma aha si aad u hesho ka kaaftoomi kasta
• Tirada heeso marka la barbar dhigo in ay barnaamijyadooda kale waa hooseysaa in tirada.
a. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in codsiga la soo bixi link ah oo uu soo kor ku siiyo si ay u soo bixi. App waa in la daah furo si ay u kor u furmay,
b. User ayaa markaas u baahan yahay in guji sifayn ku habboon si aad u hubiso in liiska kor booda iyo gabaygayga la riixi iyo ciyaaray aan ka kaaftoomi kasta oo ku dhameysan nidaamka:
image for a image loogu b
Waa mid ka mid ah kuwa codsiyada in sare leh waa in baahida loo qabo iyo inuu xaqiijiyo in diinta waa u fududahay iyo gobolka of farshaxanka. User rating ee codsiga waa cajiib sidoo:
• user ayaa u xulan kara heesaha sida ay ku sifayn iyo rating guud ahaan taas oo ka dhigaysa baadhi karo si sahlan.
• Codsiga waxaa la soo saaro by Pandora kaas oo sidoo kale loo yaqaan warbaahinta ay adeegyada la xiriira.
• Codsiga waa mararka qaar gaabis ah oo laggy taas oo khasaaro kaliya ee arrintan la xiriira.
a. User wuxuu u baahan yahay in ay soo bixi codsiga iyo raac dardar si ay u soo dajiyo si korkiisa furitaanka interface ugu weyn ee u muuqataa,
b. User ayaa markaas u baahan yahay in guji saddexda dhibcood taagan si loo hubiyo in tab raadinta u muuqataa iyo magaca heesaha khuseeya waxaa qortay si ay u hubiyaan in wixii kaloo la sameeyo arrintan la xiriira iyo heeso ay sidoo kale dhageystay:
Waa codsiga lacag la'aan ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican ee la siiyo user iyo gabayadii ugu dambeeyey ayaa la cusbooneysiiyaa hab joogto ah si user ku qanacsan yahay oo aan marnaba la gasho kaaftoomi haba yaraatee. Waxa kale oo mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu fiican isagoo rating ah 4.2 out of 5.0
• Codsiga waa mid aad u fudud dahay loading oo wuxuu hubiyaa in waayo-aragnimo ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah.
• Markii ugu loading codsiga waa super si degdeg ah taas oo ka mid ah xubnihii casriga ugu fiican ee mar walba ka dhigaa.
• Codsiga waxaa loo baahan yahay u habeyn sida interface ma aha is-dhexgal.
a. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in codsiga la soo bixi oo ku rakiban. Marka sameeyo waxa loo baahan yahay qasabadda ah si ay bogagga screen ugu muhiimsan ee:
b. Geeska bidix ee kore leh saddex taagan waa in la daah furo si loo hubiyo in shaashada soo socda u muuqataa. Laga soo bilaabo halkan doorasho dhirtu waa in la soo xulay in ay raadiso heesaha oo si fudud oo dhibaato la'aan iyo tan ayaa sidoo kale ka baxayo geedi socodka:
Waxaa hubaal ah uma baahna barasho iyo sabab la mid ah ayaa lagu qiimeeyaa mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee jeer oo dhan. Iyada oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka iyo interface user u baahan yahay in aan waxba sida ku dhawaad ​​90% ka mid ah shaqada lagu sameeyo codsiga sameeyaan.
• Codsiga ayaa la dhexgeliyey xoogga cod raadinta oo ah feature cabsi badan.
• Codsiga waa mid aad u fududahay in la isticmaalo iyo sabab la mid ah user rating waa mid aad u sarreeya arrintan la xiriira.
• Mararka qaar way adag tahay in la helo kulanka dhabta ah ee heesta sida waxaa jira tobanaan kun oo natiijo in arbushin ilaa.
a. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in codsiga la bilaabay sida ugu dhakhsaha badan ayaa lagu rakibay,
b. Image weyneyso waa in la riixi si loo hubiyo in magaca song waxaa qortay iyo natiijooyinka ku habboon ayaa la rujin si loo hubiyo in la geeyo bilaabay:
A codsiga music caan ah in la soo saaro si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah marka la eego isticmaalka iyo geynta.
• falgal interface waa gobol ka mid ah tahay oo sahlan
• Codsiga waxaa la soo saaro ilaalinta in ay maskaxda ku isbeddellada ugu dambeeyey
• Waxaa mararka qaar ku xayiran sida ay tahay iyo Dicumintiyo ah taas oo khasaaro kaliya ee arrintan la xiriira.
a. User wuxuu u baahan yahay in uu soo bixi codsiga iyo waxa ay leedahay in lagu furay si loo hubiyo in hannaanka bilaabo:
b. Sida codsigaaga kasta oo kale oo ay tahay in la xuso in image weyneyso waa in la riixi si loo hubiyo in songs waxaa la baadhay, oo ciyaaray si aad u samaysay wixii kaloo ah:
Website ugu weyn ee Cloud Sound waa mid ka mid ah website-yada ugu fiican oo caan ku tahay qaadashada music heerka ku xiga. Waxa kale oo ay caan ku tahay in la hubiyo in music la ciyaaray online oo aan wax arrintan iyo dhibaatada:
• Codsiga waa ugu fiican in la hubiyo in songs waxaa lagu ciyaaray aan ka kaaftoomi kasta oo si habsami leh.
• Waxa kale oo ay tahay in la xuso in arjiga la soo casriyeeyay oo ku raran yihiin heeso cusub oo si joogto ah.
• interface ayaa sida dadka isticmaala qaar ka mid ah oo aan soo jiidasho iyo tani waa khasaare kaliya ee sida kale waa ay adag tahay in la isticmaalo.
a. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in interface ugu weyn ee codsiga la heli korkiisa launch:
b. Sidoo kale user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in weyneyso la riixi iyo magaca song la galay. Marka la sameeyo natiijada la rabay waa in la riixi inuu u ciyaaro heesta:
Codsiga ayaa lagu soo bixi ku dhawaad ​​100,000 oo jeer oo uu ahaa saaxiibka ugu fiican ee kuwa doonaya inuu u ciyaaro heeso laga cabsado oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
• Codsiga waa ugu fiican siinaya natiijooyinka lala beegsaday.
• user waxay soo saari karaan oo badbaadiyo playlists online.
• interface ee codsiga loo baahan yahay in ka badan jiidasho leh si loo hubiyo in user baadhaa dhex app this dheeraad ah.
a. Laga soo bilaabo link ah oo uu soo kor ku xusan waa in la riixi si loo hubiyo in codsiga la soo bixi iyo interface ugu weyn ee u muuqataa,
b. Waxaa markaas in la xuso in user ay u baahan tahay in guji tab caleenta ka raadsan heeso iyo mar mid la doonayo waxa uu ku yaalaa waa in la daah furo inuu u ciyaaro:
Taageerada music codsigan waa cabsi iyo waxaa sidoo kale heer sare ah lagula talinayaa dhammaan dadka isticmaala kuwa aan xiran internetka si joogto ah kuwa si dhegaysi offline music ma aha arin oo dhan:
• Marka laga reebo music kaalmeeyo dalabka sidoo kale siisaa taageerada podcast sidoo.
• Codsiga waxaa lagu qiimeeyay ay sabab u saftay guud ahaan iyo qaababka ay cabsi badan iyo sidoo kale.
• interface ee codsiga waa qas iyo waa in la casriyeeyay si ay u daboolaan baahida dadka isticmaala ku.
a. Codsiga waa in la soo bixi oo mar rakibo dhameystiray waa in la daah furo ama riixi:
b. Tab raadinta waxaa ka dibna in la riixi si aad u hesho heesta iyo mar sameeyo waxa ay leedahay in la daah furo si loo hubiyo in uusan bilaaban ciyaaraha iyo habka uu dhamaado,
YouTube wuxuu u baahan yahay ma sal-dhigida oo dhan. Iyadoo in ka badan 100 milyan oo downloads adduunka oo dhan waa mid ka mid ah codsiyada music fiican ee mar walba bixiya madadaalada:
• Ma jiro song adduunka waxan la baadhi by codsigan
• database badan ee codsigan waa gobol ka mid ah tahay.
• Natiijooyinka waa waqtiyo qas iyo user wuxuu leeyahay si adag u raadiso gabayadii la doonayo.
a. App waa in la soo bixi link ah oo uu soo kor ku soo sheegnay:
b. Tab The "Waxa la Watch" waxaa riixi iyo magaca song la doonayo waa in la soo galay si slide natiijada ee Marka ayaa lagu samayn user ay u baahan tahay in la hubiyo in video song la riixi si ay u ciyaaro.:
Good Celceliska Celceliska Celceliska Good Celceliska Good Good Good Good
Good Good Good Celceliska Celceliska Celceliska Good Celceliska Good Good
Good Celceliska Celceliska Good Good Good Good Good Good Good
Good Celceliska Good Celceliska Good Good Celceliska Good Good Good
Good Good Celceliska Celceliska Celceliska Good Good Celceliska Celceliska Good
> Resource > Music > Halkee Dhegayso Music Online Videos in APP